Taliyihii Uu Magacaabay Farmaajo Oo La Wareegay » Axadle Wararka Maanta
Taliyihii uu magacaabay Farmaajo oo la wareegay
Muqdisho (Axadle) – Taliyaha KMG ah ee uu xalay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday u magacaabay hay’adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Gaashaanle Sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud ayaa maanta xilka kala wareegay Fahad Yaasiin, kadib munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta taliska guud.
Qoraal lagu taabacay barta twitter-ka ee NISA ayaa lagu sheegay in Yaasiin uu xilka la wareegay, isaga oo la faray inuu guto waajibaadka shaqo ee igmaday.
Sidoo kale warka qoraalka ah ayaa lagu sii yiri “Waxaan Alle uga rejaynaynaa in uu u fududeeyo masuuliyada culus ee uu Madaxweynaha JFS u igmaday,”
Arrintan ayaa ka dambeysay, kadib markii uu Farmaajo sameeyey magacaabis deg deg, kadib wareegta uu soo saaray, waxaana Gaashaanle Sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud si KMG ah loogu dhiibay hay’adda NISA, halka Fahad Yaasiin loo magacaabay la-taliyaha amniga qaranka.
Ninka la wareegay NISA ayaa horey u ahaa taliyaha nabad sugida ee gobolka Banaadir, ‘wuxuuna ka mid yahay; shaqsiyaadka lagu eedeynayo kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Si kastaba tallaabadan ayaa uga sii dareysa xiisada u dhexeya ra’iisul Rooble iyo Farmaajo, maadaama ra’iisul wasaaraha isna dhankiisa talisa NISA u magacaabay Fahad Yaasiin.